ပေးပေးပေး ငါဆည်ကိုပြန်ပေး… စားရခါနီးမှ ပြုတ်ကျသွားတည်. တရုတ်များ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပေးပေးပေး ငါဆည်ကိုပြန်ပေး… စားရခါနီးမှ ပြုတ်ကျသွားတည်. တရုတ်များ…
ပေးပေးပေး ငါဆည်ကိုပြန်ပေး… စားရခါနီးမှ ပြုတ်ကျသွားတည်. တရုတ်များ…
Posted by zaymdy on Oct 6, 2011 in Copy/Paste |0comments
သူများပစစည်း ကို အတင်းလိုချင်ကြသူများ နောက်ဖြစ်လာမယ် ဘေးကြိုးမတွေးပဲ. သူတို.ဖြစ်ချင်တာပဲ ပြောလိုက်သည်.CPI ဥက္ကဋ္ဌ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းထားပါက ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်ရမည့်အခြေအနေများသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း CPI ဥက္ကဋ္ဌ ခြိမ်းခြောက်
http://www.first-11.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10410:-cpi-&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112 သည်လဒ်တွင် ဖတ်ရှိနိုင်ပါသည်။
ထူခြားတာတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ သူကြွယ်ဘွဲ့ရ သူဌေးများ မြစ်ဆုံကိစ္စမှာ လုံးဝ ပါးစပ်ပိတ် အသံတိတ်နေခဲ့ကြတာတော့ သတိထားမိမှာပါ..။
အရင်တုန်းကသမ္မတကြီး တရုတ်ပြည် သွားတုန်းက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လိုက်သွားခဲ့ကြတဲ့ သူဌေးတွေ၊ တရုတ်နဲ့ စီးပွားရေးစပ်တူလုပ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က နိုင်ငံတော်သူဌေးကြီးများ.ဘာလုပ်နေကြပါသလဲ..။ အချိန်တန်တော့ သူတို့ရဲ့ စာတိရုပ်ဟာ ဘွားဘွားကြီး ပေါ်လာပါပြီ..။ သာပေါင်းညာစား၊ ခါတော်မှီသာကူး တို့ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထက် ပိုပြည့်စုံတဲ့စကားရှိရင် ခိုင်းနှိုင်းချင်ပါတယ်.။ သမ္မတကြီးလည်း အခုလောက်ဆို သဘောပေါက်မှာပါ..။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြစ်ဆုံအရေးအတွက်. သမ္မတအပါအ၀င် အစိုးရ၊ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် ပြည်သူ၊ ပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ စာနယ်ဇင်းမီဒီယာတွေက တစ်တပ်တစ်အား လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီ ခါတော်မီ ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေက ဘာဖြစ်လို့ ပါးစပ်ပိတ်နေကြတာပါလဲ..။ com .. မှ ရေးထားသည်။ ရွာသားများရော ဘယ်လို.မြင်.လည်း သမမကြီးရော ခေါင်းရူပ်နေပြီးလား…တရုတ်များ ပြောချင်တာကတော. အမျိုးမြင့် အမျိုးမှန်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ ယူဆထားကြရင် သူများနိုင်ငံကိုလာပြီး သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံ မကြံ နဲ့ဗျာ””လို. ရေးသားထားသည်..saifreedom ပြောချင်တာတစ်ခုက ကျွနုပ်တို.နိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သည် ဒါကြောင်. ပြည်သူဆနတာ အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည် ဒါကို တရုတ်ပေါက်ဖော်များ နားလည်သင်.သည်။